I-Farmhouse eduze ne-Hyderabad enechibi elilingayo - I-Airbnb
I-Farmhouse eduze ne-Hyderabad enechibi elilingayo
Mirzapur, Pudur Mandal, i-India
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Maqdoom Rahman
Indawo eyimfihlo engamahektare angu-4 enechibi elikhulu (phakathi kwe-Chevella neVikarabad). Eduze nomgwaqo omkhulu, ipulazi le-eucalyptus elihle elincanyelwayo ukuthwebula amafilimu eduze nase-Ananthagiri Hills.
I-carpet lawn 60'X80'
Iphuli 25'X30' 5.10' ukujula okukhulu
IGUMBI LOKUBHEDA ELILODWA E-VILLA EYINHLOKO (ENYE IGUMBI LOKUGEZELA ELINAMANDISIWE)+15 omatilasi
Izinkonzo zasekhishini-izimbiza ezinkulu zokupheka, igesi yokupheka, izinto zokosa inyama, amalahle- Kusebenza izindleko ezengeziwe
Sicela ulethe amapuleti nezingilazi ezilahlwayo ukuze usebenzise ukudla okulula/ukudla.
Le ndawo egcwele imvelo ingama-51 KM ukusuka edolobheni. Ilungele ukuphumula, i-detox kanye ne-orchestrate imisebenzi yokwakha iqembu.
>> iboshwe ngokuphelele udonga lwamamitha ayi-12 olunamasango - Iyimfihlo futhi ivikelekile.
>>inikezwa iqembu elingu-1 lezivakashi nganoma yisiphi isikhathi.
>> isendleleni eya e-Anantagiri Hills.
Ungacela umnakekeli ukuthi acime zonke izibani futhi abuke ubuhle bemvelo - idome elikhulu elikhanyiswe ngezibani ezincane (izinkanyezi esibhakabhakeni ...) Futhi kunomoya ohlanzekile - vele uzikhiphe ngokwakho ....
Okubaluleke kakhulu - Ungahlala ngaphansi kokukhanya kwenyanga futhi uthole imibono emisha yomsebenzi wakho ..
Ngaphezu kwalokho, sihlinzeka
>> izinsiza zokupheka ezinompheki omuhle kakhulu (izinto ezingavuthiwe zizoba ngezakho) -> Lokhu kuzokhokhiswa imali eyengeziwe.
>> izoso -> Lokhu kuzokhokhiswa okwengeziwe.
>> i-bonfire -> Lokhu kuzokhokhiswa okwengeziwe.
Ilungele uhambo lwasebusuku, abathandi bemvelo, abathandi bezithombe, imisebenzi yokwakha iqembu, njll.
Iyakwazi ukubona amaphigogo eduze phakathi kokusa nokuhwalala ....
umbhede oyidabulu engu- 1, omatilasi abangu- 5
2 osofa, omatilasi abangu- 5
4.77 · 74 okushiwo abanye
Imvelo eluhlaza nemsulwa kuyo yonke indawo ....
Ibungazwe ngu-Maqdoom Rahman
Me and my family like to explore the greatness of almighty who has created vast universe for us. Our farm house is a minute reflection of the natures beauty. We love to interact wi…
Ngizohlala ngitholakala ngocingo.